Shalay iyo ganacsiga ay sameeyeen filimada: Aiyaary, Black Panther, Pad Man & Padmaavat – Filimside.net
Taariikhda: February 21, 2018
Filimka Aiyaary ayaa ganacsigiisa hoos u socdo maalin walbo wuxuuna keenay Talaadadiisa kowaad 1.20 Crore taasi oo ka dhigan 15% – 20% hoos u dhac inuu sameeyay marka lala bar bar dhigo Isniintii ganacsigiisa.
Aiyaary mudo shan maalmood ah wuxuu keenay 14.45 Crore (Trade Figure) waxaana xusid mudan in 20 Crore cimri ahaantiisa gaari doono waxayna u badan tahay Sidharth filimkiisii A Gentleman ganacsigii uu sameeyay ee ahaa 17.72 Crore oo kale inuu filimka Aiyaary cimri ahaantiisa sameyn doono waana filim Disaster ah.
Filimka Hollywood-ka ah Black Panther ayaa isagana 20% hoos u dhac sameeyay wuxuuna keenay 2.50 Crore Talaadadiisa kowaad taasi oo ka dhigan mudo shan maalmood inuu soo xareeyay 24.50 Crore (Trade Figure) sidoo kalena mashruucaan waa mid ka guuleestay filimka Hindiga ah Aiyaary.
Dhinaca kale filimka Padman ayaa isagana keenay 1.25 Crore Talaadadiisa labaad wadarta guudna ganacsigiisa wuxuu haatan marayaa 73.50 Crore (Trade Figure) mudo 12-maalmood ah waxaana muuqato in mashruucaan cimri ahaantiisa 80 Crore wax ku darsan doono.
Ugu dambeyntii filimka Padmaavat ayaa sameeyay ganacsigii ugu wacnaa maalintii shalay ahayd marka filimada Hindiga lala bar bar dhigo wuxuuna keenay 1.30 Crore Talaadadiisa afaraad.
Padmaavat ganacsigiisa mudo 27-maalmood wuxuu haatan marayaa 265.43 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo soo daabacday wuxuuna cimri ahaantiisa gaari doonaa 280 Crore ilaa 285 Crore inta u dhaxeyso.
Waxaa Aqrisay 818